အဖြစ်များတဲ့ အသားရေပြဿနာအတွက် ဖြေရှင်းနည်းများ - YOYARLAY Digital Media and News
မိန်းကလေးတော်တော်များများအတွက် အသားရေကို ဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်းရတာက တာဝန်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ နေနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မိတာနဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှုတွေက အသားရေပြဿနာတွေ ဖြစ်လာရခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရင်းတစ်ခုပါပဲ။ အသားရေပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတာနဲ့ အရေပြားဆရာဝန်တွေဆီ သွားပြကြရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတလေ သဘာဝအတိုင်းကုသတာကလည်း ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဖြစ်များလေ့ရှိတဲ့ အသားရေပြဿနာတွေအတွက် ကုသနည်းတချို့ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
အသားရေမညီညာဖြစ်ပြီး ဝက်ခြံ၊ အမဲစက်ပေါက်တတ်တာက ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ လွယ်ကူတဲ့ ပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအတွက် ရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းနည်း ရှိတယ်ဆိုတာသိရင် သင် ဝမ်းသာသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကတော့ ဒိန်ချဉ်ကို အသုံးပြုလိုက်ရုံပါပဲ။ ဒိန်ချဉ်က ဆဲလ်အသေတွေကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်တဲ့ လက်တစ်အက်ဆစ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ် (စားပွဲတင်ဇွန်း (၁) ဇွန်း) ကိုယူပြီးရင် မျက်နှာမှာလိမ်းလိုက်ပြီး မိနစ် (၂၀) လောက်ထားလိုက်ပါ။ အဲဒီနောက် ရိုးရိုးရေနဲ့ မျက်နှာကို သန့်စင်ပေးပါ။ ဒီနည်းကို (၁၅) ရက်လောက် ပုံမှန်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ လွှတ်ပစ်လေ့ရှိတဲ့ သစ်ကြားသီးခွံက အသားရေအတွက် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ သစ်ကြားသီးခွံကို အမှုန့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး သင်္ဘောသီးအနှစ်နဲ့ သံပုရာရည်တွေကို ရောထည့်လိုက်ပါ။ ဒီအရောအနှောနဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်ပေးရင် မွဲခြောက်မဲညစ်တဲ့အသားရေကို ဖြစ်စေတဲ့ ဆဲလ်အသေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
အသားရေ နေလောင်တာကို နွေရာသီမှာ သေချာပေါက်ကြုံတွေ့ကြရမှာပါ။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင် သခွားသီးအရည် (စားပွဲတင်ဇွန်း (၁) ဇွန်း) ၊ သံပုရာရည် (စားပွဲတင်ဇွန်း (၁) ဇွန်း) နဲ့ နှင်းဆီရည် (စားပွဲတင်ဇွန်း (၁) ဇွန်း) တို့ကို ရောစပ်ပြီး မျက်နှာမှာ ပုံမှန်လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် နေလောင်တဲ့အသားရေကို ဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အုန်းဆီက အသားရေကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးတဲ့ အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်။ အုန်းဆီကို နည်းနည်းအပူပေးပြီး လည်ပင်းနဲ့ မျက်နှာမှာ လိမ်းပေးပါ။ ပြီးရင် (၅) မိနစ်လောက် မျက်နှာကို စက်ဝိုင်းပုံစံအတိုင်း နှိပ်နင်ပေးပြီး တစ်ညလုံး လိမ်းထားလိုက်ပါ။ Scrub အနေနဲ့ အသုံးပြုချင်ရင် သကြားထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ အုန်းဆီမှာ ပါဝင်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေက အသားရေကို အာဟာရဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး အသားရေ စိုပြေဝင်းပလာစေပါတယ်။
သင့်အသားရေက အဆီပြန်တတ်တယ်ဆိုရင် သံပုရာရည် (စားပွဲတင်ဇွန်း (၁) ဇွန်း) ကို ရေ (စားပွဲတင်ဇွန်း (၁) ဇွန်း) တို့ကို ရောစပ်ပေးပြီး မျက်နှာမှာ လိမ်းပေးပါ။ ပြီးရင် (၁၀) မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပါ။ အဲဒီနောက် ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်ခြံပေါက်တာက အဖြစ်များတဲ့အသားရေ ပြဿနာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နနွင်းမှုန့်နဲ့ နှင်းဆီရည်တို့ကို ရောစပ်ပြီး ဝက်ခြံပေါက်တဲ့နေရာမှာ လိမ်းလိုက်ပါ။ (၁၅) မိနစ်ကြာပြီးနောက် ရေနဲ့သန့်စင်ပေးပါ။ ဒီနည်းကို အသုံးပြုပြီးနောက် (၆) နာရီကြာတဲ့အထိ မိတ်ကပ်မလိမ်းပါနဲ့။
အသားရေ အမျိုးအစားတိုင်းတွေ အသားရေပြဿနာတွေ ကုသလို့ရမယ့်နည်းတွေကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မိန်းကလေးအကုန်လုံးအတွက် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်နော်..။
Ref: Home remedies: Your common skin issues resolved right here!
Previous Previous post: ဂိုးသမား ကီပါအပါအဝင် ကစားသမား ၈ ယောက်ကို ရောင်းထုတ်ချင်နေတဲ့ လမ်းပတ်
Next Next post: သဘာဝတရားနဲ့ထိတွေ့ပါ….
ကိုယ်လုံးတီး အိပ်စက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး
အမေရိကန်မှာ စစ်တမ်းအရ ကိုယ်လုံးတီး အိပ်စက်သူဟာ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီထက် မာ်းစွာ နည်းပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်လုံးတီး အိပ်စက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး များစွာ ရှိကြောင်း ဆေးပညာရှင်များမှ သက်သေပြထားပါတယ်။ Post…
Published: August 17, 20162:59 am Updated: March 6, 20191:33 pm